Nzira yekuratidzira / kuvanza iyo iCloud Drive kunyorera kweIOS 9 | IPhone nhau
Maitiro ekuratidza / kuvanza iOS 9 iCloud Drive app
Apple yakaburitsa iCloud Drive izvozvi gore rapfuura (mu beta), asi kusvika zvino tanga tisina chirongwa chekuzvarwa cheIOS. Isu taigona kuwana zvirimo nevechitatu-bato maapplication, asi mashandiro acho aive akaipa kwazvo. Aya matambudziko anofanira kupera pamwe yepamutemo iCloud Drive app yakave yakabatanidzwa muIOS 9.
Iyo app yacho yakaganhurirwa izvozvi, asi idanho munzira kwayo. Asi pachine nhanho imwe inogona kuve yakakosha uye ndiyo tinogona kuratidza kana kuvanza iko kunyorera kutinetsa sevamwe vazhinji vanobva kuApple. Uye ndiani anoziva? Pamwe, mune ramangwana tinogona kuviga mamwe mafomu atisina kumboshandisa. Ndinoziva Apple haifanire kuvasanganisa, asi zvirinani kuti isu hatingavaone.
Pakave nezviitiko umo iyo iCloud Drive application isina kuoneka nekumisikidza, saka ivo vanofanirwa kuitisa nemaoko. Kana iwe ukaisa iOS 9 uye haugone kuona mashandisiro, tevera nhanho idzi:
Isu tinozvizivisa pachedu (dai takanga tisati tave).
Takapinda iCloud Drive
Isu tinoshandisa switch (chinja)
ICloud Drive ichaonekwa pane iyo SpringBoard
Mune yangu nyaya, uye mune iyo yevakawanda, tichangovhura iyo iPhone, inotibvunza kana tichida kuti application iratidzwe paChitubu. Zvine musoro, kana isu tisina kana chinhu chakachengetwa muICloud Drive kana kuronga kuzviita, hazvina musoro kusiya chishandiso pachiratidziro chemba. Asi kana, pane kudaro, isu tine mafoto, mapepa emapeji kana chero mhando yegwaro muICloud Drive, kuve neyekuzvarwa kunyorera chinhu chakakosha chitsva. Ivo vanongoda kuvandudza mashandiro zvishoma kuti zvinhu zvese zviende sezvazvinofanira kuenda muchigadzirwa cheApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Maitiro ekuratidza / kuvanza iOS 9 iCloud Drive app
Vera Marìn akadaro
Pindura Vera Marìn
Giovanny ramos akadaro
Pindura Giovanny Ramos
Dhawunirodha iyo iOS 9 Wallpaper
Jim Balsillie anoreurura kuti iyo iPhone yaishungurudza BlackBerry